Nin Soomaali ah oo isku gubay Dalka Papua New Guinea
Wednesday June 12, 2019 - 12:21:44 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Nin Soomaali Qaxooti ah kuna jiray Xero Qaxooti oo ku taalla Jasiiradda Manus ee Dalka Papua New Guinea ayaa dab is qabadsiiyay.
Ninkan oo da’diisa lagu sheegay 31 jir ayaa la sheegay in uu ku daahay xerada qaxooti islamarkaana ka rajo dhigay in uu helo magangalyo.
Qof ka mid ah dadka kula jira Xerada ayaa sheegay in Ninkaasi dhimirka ka xanuunsaday islamarkaana rajo beel ku dhacay.
Shamindan Kanapadhi, ka mid ah dadka xerada qaxooti kula jira Ninka Soomaaliga ah ee dabka is qabadsiiyay ayaa sheegay in uu si ku talagal ah dab ugu qabtay Joodarigii uu ku jiifay sidaasna dabka ku qabsaday.
Inkasta oo uusan u geeriyoon dabkaas haddana dhaawac ayaa soo gaaray waxaana la dhigay Isbitaal ku yaalla Jaziiradda Manus.
Falka isgubidda ah ayuu Ninkaas ku kacay Isniintii,waxaa xeradaas kula jira ku dhawaad 50 qof kuwaas oo aan rajo ka qabin in dalalka Papua New Guinea iyo Australia ay qaabilaan.